‘प्रेम गीत–३’ को सकियो हिन्दी डबिङ, रिलिज कहिले ? - bampijhyala.com
Home > मनोरञ्जन > ‘प्रेम गीत–३’ को सकियो हिन्दी डबिङ, रिलिज कहिले ?
१८ असार २०७८, शुक्रबार १६:२७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । फिल्म ‘प्रेम गीत–३’कोे हिन्दी डबिङ सकिएको छ । निर्माता सन्तोष सेनले फिल्मको हिन्दी डबिङ मुम्बईमा सकिएको जानकारी दिए । फिल्म सम्पादन सकिएको विषयमा सेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोष्ट समेत गरेका छन् । जसमा सञ्जल संकलाले ‘प्रेम गीत–३’ को हिन्दी भर्सन सम्पादन राम्रोसँग गरेको उल्लेख छ ।
सञ्जयले सय/दुईसय करोडका चलचित्रमा काम गरे पनि सानो इन्डस्ट्रीबाट आएको आफ्नो चलचित्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम गरेकोमा सेन खुसी ब्यक्त गर्दछन् । सेनाले सञ्जयले मुक्त कण्ठले चलचित्रको लोकेशन, कलाकार र सिङ्गो चलचित्रको समेत तारिफ गरेको जनाएका छन् ।
महंगो लगानीमा निर्माण भएको ‘प्रेम गीत ३’ ले भारतमा नेपाली चलचित्रको ढोका खोल्ने सन्तोषको विश्वास छ । फिल्ममा शिव श्रेष्ठ, प्रदीप खड्का, मनिष राउत, अनुभव रेग्मी, सम्बृद्धि शाही ठकुरी, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओत्से गुरुङ, पुस्कर कार्की, प्रेम पुरी, लक्ष्मी वर्देवा, योगिशा खत्री, जीवन भट्टराईलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । ‘प्रेमगीत-३’ ऐतिहासिक प्रेमकथामा बनेको फिल्म हो । फिल्मबाट क्रिस्टिना गुरुङले अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी छन् ।
एचआईडिसीएल (HIDCL) ले साउन ५ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काँग्रेसमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ४ लाख ४३ हजार क्रियाशील सदस्य थपिए १८ असार २०७८, शुक्रबार १६:२७
७० वर्षीय गन्धर्व १३ वर्षको उमेरदेखि सारङ्गी रेट्दै १८ असार २०७८, शुक्रबार १६:२७
कस्तुप र देवीको तीज गीत ‘तिम्रो फोटो आँखैमा’ १८ असार २०७८, शुक्रबार १६:२७
सोङ्गुकिपा ‘प्रेमनाथ’ डिजिटलकु खोईदउ जुर १८ असार २०७८, शुक्रबार १६:२७
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान अनलाइन आवेदन खुल्ला १८ असार २०७८, शुक्रबार १६:२७